घर संयुक्त राज्य फुटबॉल स्टोरीहरू वेल्श फुटबल खेलाडीहरू डेनियल जेम्स बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एलबीले पूर्ण स्टोरीको फुटबल प्रतिभा प्रस्तुत गर्दछ जसले सबै भन्दा राम्रो नामले चिनिन्छ "दान". हाम्रो ड्यानियल जेम्स बचपन स्टोरी प्लस अनलल्ड जीवनी तथ्यहरूले तपाईंलाई बचाउनु पर्ने घटनाको पूर्ण खातालाई आफ्नो बचपनको मिति सम्म ल्याउनेछ।
ड्यानियल जेम्स बचपन कथा- विश्लेषण
हो, अंग्रेजी 2018 / 2019 च्याम्पियनशिप फुटबल हेर्ने सबै यो सीजन थाहा पाउनेछ कि वास्तवमा दानियल जेम्स हो। त्यो त्यस जवान जस्तो एक आश्चर्यचकित फुटबलर हो माइकल ओवेन उनको गति र ट्रिकरी को लागि जान्छ, जसले मैनचेस्टर यूनाइटेड बनाएको छ उनको घुटनों मा झुंडिरहेको छ। तथापि, फुटबल फ्यान को केहि हात मात्र ड्यानियल जेम्स जीवनीको बारे धेरै जान्दछन् जुन धेरै रोचक छ। अब अनावश्यक बिना, चल्न सुरु गरौं।
डेनियल जेम्स बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमि
सुरू गर्न, उसका पूरा नामहरू ड्यानियल ओवेन जेम्स हुन्। नोट: उहाँ सँग कुनै परिवार सम्बन्ध छैन माइकल ओवेन। ड्यानियल जेम्सले प्रायः भनिन्छ जसलाई बुनेले, यूनाइटेड किंगडममा आफ्ना आमाबाबुलाई नोभेम्बर 10 को 1997th दिनमा जन्माइएको थियो। डेनको जन्म भएको बीवरले यॉर्कशायरको ऐतिहासिक बजार काउन्टी शहर होल्यान्ड सिटीको नजिकै इंग्ल्यान्ड हो।
डेनियल जेम्स जन्मस्थान, बेवर्ली, यूनाइटेड किंगडम
यद्यपि प्रायः प्रशंसकले उनलाई शुद्ध वेल्च परिवार मूलको रूपमा कसैको रूपमा हेर्छन् शायद उनी वेल्श नेशनल टीमको आफ्नो निष्ठाको कारण हो। यद्यपि, उनको सम्पूर्ण परिवारले उनीहरूको मूल वेल्सबाट छैन। केहि पारिवारिक सदस्यहरू इङ्गल्याण्डबाट हिउँदछन् जबकि अरू वेल्श मूलको हुन्।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… ड्यानियलले वेल्लेसलाई आफ्नो पिता जो अबरडियरमा जन्मेका थिए, दक्षिण वल्ल्यान्डको रोडन्ड्ड सियन टाफको सियन घाटी क्षेत्रको एक सहरमा बेइजिङको प्रतिज्ञा गर्ने निर्णय गरे।
डेनियल जेम्स बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप
बढ्दै जान्छ, दानियलले दक्षिण हन्सले स्कूल र छठी फारम कलेजमा भाग लिनुभयो। यो Melton, यॉर्कशायर, इंग्लैंडमा स्थित एक ठूलो विद्यालय हो जुन एथलेटिक बच्चाहरु लाई बढावा दिन को लागी प्रतिष्ठा कमाएको छ।
दानियल जेम्स 'शिक्षा
एथलेटिक्सको बारेमा बोल्दै, दानियल आमाबाबुले छोराछोरीलाई आफ्नो अध्ययनको लागि स्कूल खेलकुदहरूको लागि सहमत गरे। तिनका विद्यालयहरूले उनलाई प्रस्तावित प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धात्मक एथलेटिक्स र खेल अवधिको दौडान खेलिरहेका थिए।
डेनियल जेम्स क्यारियर बिल्डअप स्टोरी। क्रेडिट वेल्टन प्राथमिक स्कूलको क्रेडिट
ड्यानियलको एथलेटिकवादलाई फुटबलमा पठाइएको थियो जुन उनले विद्यालयमा मात्र खेल गरेनन् तर बेवर्लीका स्थानीय क्षेत्रहरूमा। उहाँले9वर्षको उमेर सम्म जारी राख्नुभयो, वर्ष भविष्यको भविष्यको सुरुवात भयो।
डेनियल जेम्स बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- प्रारम्भिक क्यारियर लाइफ
फुटबलका लागि ड्यानियलको जुनूनले हिल सिटी अकादमीको ध्यान खिचेको छ जसले एकपटक उनलाई 2006 मा स्वीकार्दै उनी नौ वर्षको उमेरमा थिए।
होल सिटी अकादमी
यद्यपि अकादमीमा उच्च मूल्याङ्कन गरिएका युवाहरू भए तापनि ड्यानियलले उमेरको गेटको माध्यमबाट काम गर्न सकेन। क्लबले प्रभाव पार्ने उनको लागि उनको लामो समय लागेन। बच्चाको रूपमा, उनले मैनचेस्टर युनाइटेडलाई समर्थन गरे र उनको मनपर्ने खेलाडी थियो रयान गिग्स.
डेनियल जेम्स बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- सडकको प्रसिद्धि कथा
ती टाईगर्सको युवा सेटअपको साथ आठ वर्ष बिताए तापनि एक विचाराधीन बिन्दु आयो जब विगरले निर्णय गरे कि दक्षिण वेल्समा एक कदम उनको युवा क्यारियरको लागि उत्तम विकल्प हुनेछ। जेम्सको लागि आफ्नो आमाबाबुको पारिवारिक सम्बन्धको लागि स्वन्साए दोस्रो घर बनेको थियो।
ड्यानियल जेम्स स्वास्नीमा बसाइँ
वेल्समा हुँदा, डेनियल जेम्सले वेल्श यूएक्सएनएमएमएक्स टोलीद्वारा बोलाइयो। आफ्नो पहिलो वर्षमा, उनले एक्सएमएनक्स विजय शील्ड जितेकी थिइन्।
डेनियल जेम्स बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- फेम स्टोरीमा उठाउनुहोस्
फेरि, याकूबले स्वान्स्सी स्क्वाडको लागि एक प्रमुख भूमिका खेलेका थिए जसले आफ्नो ऐतिहासिक Under-23s लीग र कप डबललाई जित्यो। व्रिङले अभियानमा नौ गोलहरू जिते।
डेनियल जेम्स फेम स्टोरमा उठ्यो डेनियल जेम्स उठाइयो स्टोरी। आईजीको क्रेडिट
जब तपाईं पिचमा डेनियल जेम्स हेर्नुहुन्छ, तपाईलाई सूचना दिनुहुने पहिलो कुरा उनीहरूको डरलाग्दो गति हो। उहाँ एकपटक 36kph मा बन्द भएको छ, जुन लगभग समान छ अरेजन रोबेनको विश्व-रेकर्ड गति। वेल्श स्टारले तलका भिडियोमा देखाएको जस्तो तीव्र गति र हास्यास्पद छ। MP10 लाई क्रेडिट
वर्तमान समयमा लेखनको समयमा, दानको गति र आक्रामक गुणस्तरले उनलाई निगरानी गरिरहेको छ शीर्ष प्रीमियर लीग क्लबहरूको संख्यामा, तिनीहरूमध्ये सबैभन्दा राम्रो मैनचेस्टर युनाइटेड हो। यो केवल समय को एक मामला हो भन्दा पहिले उनले स्वन्सेया को अन्तिम अलविदा भन्छन्। बाकि, तिनीहरू भन्नाले, अहिले इतिहास हो।
डेनियल जेम्स बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- सम्बन्ध जीवन
दानियल याकूबले प्रसिद्धि बढ्यो, सबैको ओठमा प्रश्न गरिएको छ; ...ड्यानियल जेम्स प्रेमिका, पत्नी वा वाग को हुनुहुन्छ?.
त्यहाँ कुनै तथ्यलाई इन्कार गर्न सकिँदैन कि जेम्सको सहनशीलता गति र चकलेटले उनलाई महिलाहरूलाई दाखिलको दाखिल बनाउन सक्दैन। सफल फुटबलरको पछि, रिया ह्यूजेसको सुन्दर व्यक्तिमा ग्लैमरस प्रेमिका अवस्थित छ।
डैनियल जेम्स गर्लफ्रेंड
रिया ह्यूजेस एक निर्दोष व्यक्ति हो जुन उनको मान्छे को लागि भावनात्मक समर्थन प्रदान गर्नु भन्दा बढी छैन। दुवै प्रेमीहरूले डिसेम्बर 2017 वरिपरि नाउको विवाहलाई सम्बोधन गर्ने निर्णय गरे। यो समारोहको एक प्रमुख उचाइ यो क्षण थियो जब प्रेमी केटाले आफ्नो सामान्य उच्च छिद्रण चुम्बन दिए।
दानियल जेम्स विवाह
उनीहरूको विवाह पछि, ड्यानियल र रिया स्वास्नी फुटबल क्लबको सबै भन्दा स्थापित जोडीहरु मध्ये एक रहेको छ।
डेनियल जेम्स सम्बन्धी जीवन
डेनियल जेम्स बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- व्यक्तिगत जीवन
ड्यानियल जेम्स व्यक्तिगत जीवन जान्न पाउनुले तपाईंलाई तिनको पूर्ण चित्र प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ। सुरू गर्न, दानियल आफ्नो जसको चरित्रको बारेमा चिनिन्छ। उहाँ सबै दिन मुस्कान गर्न सक्नुहुन्छ र विभिन्न मानव व्यवहारमा अझ सजिलै अनुकूलन गर्न सक्षम हुनुहुन्छ।
डेनियल जेम्स पर्सनल लाइफ तथ्य
तपाईंलाई थाँहा थियो?… डेनियल जेम्स अमेरिका भ्रमण गर्न मन पराउँछन् र उहाँका बलियो प्रशंसक हुनुहुन्छ बैरक ओबामा। तल उनीहरूलाई व्हाइट हाउसमा भेट्नको तस्बिर हो।
दानियल जेम्स व्यक्तिगत जीवन - व्हाइट हाउसको भ्रमण गर्नुहोस्
डेनियल जेम्स बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- पारिवारिक जीवन
ड्यानियल जेम्स आमाबाबुले आफ्नो छोरामा कठोर मानसिकतालाई तुरुन्तै फाइदा लिनका लागि उपस्थित छन्। वर्तमानमा हामी लेख्दछौं, ड्यानियलले प्रसिद्ध रूपमा सुरू गर्न शुरु गरेको तथ्यले गर्दा उनीहरूको माम वा बुबाको बारेमा धेरै कम जान्छ।
तिनको भाइको बारेमा: दानियल याकूबले आफ्ना आमाबाबुसँग एक्लै बढेको थिएनन्। उहाँसँग एकजस्तै ठूलो भाइ छ जो नाउँ एलेक्स जेम्सले जान्छ।
डेनियल जेम्स भाइ- एलेक्स
डेनियल जेम्स बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- LifeStyle
धेरै मानिसहरू सोच्न सक्छन् कि ठूलो भाग एकदम ठूलो हवेली, लक्जरी कारहरु, र धन को अन्य लक्षणहरु संग सम्बद्ध छ। तथापि, यो ड्यानियल जेम्स को मामला छैन जुन £ 15 मिलियन मा मूल्य को बावजूद आफ्नो पत्नी संग एक ताजा ताजा जीवन जीता छ।
डेनियल जेम्स लाइफस्टीले तथ्यहरू
डेनियल जेम्स बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- अनियमित तथ्यहरू
डेनियल जेम्स एकपटक7सेकेन्डको बारेमा अर्को पटक स्वान्सियस लिबर्टी स्टेडियमको एक छोटोबाट आफ्नो टिमलाई पराजित गर्यो। तल हेर्नुहोस् भिडियो। BTSport लाई क्रेडिट
दोस्रो, वर्ष (1997) डेनियल जेम्स जन्म भएको थियो निम्न यादगार घटनाहरू;
(i) काल्पनिक प्रेम कथा टाइटैनिक (केट विन्सेलेट द्वारा चित्रित Leonardo Di Caprio) 1997 मा खोलिएको छ र चलचित्र चलचित्रमा सबैभन्दा ठूलो बक्स-अफिस चलचित्र हो।
ड्यानियल जेम्स जन्म वर्षको वर्ष टाइटैनिक रिलीज भएको थियो।
(ii) त्यस वर्ष 1997 ले पनि हेररी पोटर र द फिलोस्फर स्टोन प्रकाशित गरे।
डेनियल जेम्स अनल्ट तथ्य - उनको जन्म वर्ष हैरी पोटरको वर्ष थियो। ब्लूमम्सबरीको क्रेडिट
(iii) वर्ष 1997 मा कार दुर्घटनामा उनको आकर्षण र डाउन-पृथ्वी प्रकृतिको लागि जानिएको राजकुमारी दिआना।
डेनियल जेम्स अनल्ट तथ्य - त्यो वर्ष राजकुमारी डिना डाइड जन्मेको थियो। दैनिक एक्सप्रेसको क्रेडिट।
डेनियल जेम्स बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- भिडियो सारांश
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो डेनियल जेम्स बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाईंले केहि कुरा खोज्नुहुन्छ जुन सही देखिएन भने कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी सधै आफ्नो विचारहरुको मूल्य र आदर गर्नेछौं।